Maraykanka oo ka hadlay duqaymo ka dhacay gobalka Bari – Radio Daljir
Maraykanka oo ka hadlay duqaymo ka dhacay gobalka Bari
Juunyo 3, 2019 5:28 b 0
War kasoo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa lagu faah faahiyay howlgal ka dhan Daacish,kaasi oo ka dhacay gobolka bari,waxaana mareykanka uu sheegay in uu Daacish gaarsiiyay Khasaare.
Warka ayaa lagu sheegay in Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya kuwa Soomaaliya ay bartilmaameedsadeen degaanno ka mid gobolka Bari halkaasoo ay ku sugnaayeen xubno ka mid ah Daacish.
Taliska Mareykanka ayaa sheegay in howlgalka intii uu socday ay ka qeyb qaateen diyaaradaha aan duuliyaha la heyn ee Mareykanka.
3 ka tirsan Daacish ayaa lagu dilay duqeyntaasi,iyadoo uu burbur soo gaaray saldhiggii ay halkaasi ku lahaayeen Daacish.
“Dowladda Mareykanka waxaa ka go’an sii wadista beegsiga Daacish iyo Al Shabaab si ay uga hor tagaan dhibaatooyinka ay shacabka ku hayaan,iyadoo sidoo kale mar walba la xaqiijinayo in aan khasaare dhimasho iyo dhaawacba soo gaarin dadka rayidka ah” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay taliska Mareykanka.
Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa muddooyinkii dambe waxa ay kordhiyeen duqeymaha ay la beegsanayaan saldhigyada Shabaab ay ku leeyihiin Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya
Ciidanka badda Liibiya oo soo badbaadiyey muhaajiriin halka kuwo kalena lagu la’yahay xeebaha Liibiya